Jananinepal.comभगवान छैनन् भन्नेले बाबाआमा पनि छैनन् भन्नू पर्‍यो -शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष दक्षिणकाली अदृश्य शक्ति केन्द्र - Jananinepal.com
भगवान छैनन् भन्नेले बाबाआमा पनि छैनन् भन्नू पर्‍यो -शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष दक्षिणकाली अदृश्य शक्ति केन्द्र
जननी नेपाल, काठमाडौ माता दक्षिणकालीका प्रिय भक्त शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ जसको परिचय माता दक्षिणकाली अदृष्यका वर्तमान अध्यक्षको रूपमा हामीले चिन्न सक्छौ । माता दक्षिणकालीको सेवा गर्दै सोहि मन्दिरका प्रबन्धक हुँदा हुँदै एक्कासी माताको अदृश्य शक्ति प्राप्त गर्नुभएको वरिष्ट गुरु सगँको विशेष कुराकानी गर्नेछौ ।
– गुरु हजुरलाई जननी नेपालमा स्वागत छ ।
धन्यवाद यस जननी नेपाललाई माता दक्षिणकालीको कृपा सदैव रहोस यस जननी नेपालका सम्पुर्ण युनिटलाई धन्यवाद
– हाम्रो राष्ट्र धर्म अनि संस्कृती बचाई राख्न हजुरले कस्तो भुमिका खेल्नु भएको छ?
यो धर्म आस्था विश्वास नेपाली जनता सम्पूर्णले बचाएर राख्नु पर्छ । हाम्रो धर्म हामीले बचाई इतिहासमा राख्नु पर्छ । पुर्खाहरुले के गरे कसरी गर्द्थे कस्तो बलिदान दिए त्यसको बारेका बुझेर हामि सबै मिलेर हाम्रो हिन्दु धर्मको रक्षा गर्नु पर्छ । यसमा आइपर्ने मैले गर्नसक्ने मैले गरेको छु । नेपाल एउटा यस्तो देश हो ,जहाँ धार्मिक आस्था छ हरेक ठाउँमा भगवानको बास भएको हाम्रो नेपाललाई तथानाम भनेर हिड्नेहरु आज कुरुप भएका छन् । यो आम नेपालीले देखेकै कुरा हो । हाम्रो नेपाल हिन्दु राज्य हो । यो हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ । यहाँको संस्कार परम्परा बचाइराख्नु पर्छ ।
– के हाम्रो देशमा संस्कार हराउदै गएको हो?
हाम्रो संस्कार विदेशिहरुको पैसामा सजिलो पन खोजिदै छ ,अव सजिलो पन खोज्दा नेता देखि सम्पूर्ण विदेशिको खोल ओडेर हाम्रो धर्मको रक्षा गर्ने मान्छे नभएर अर्धपागल जस्तो बोल्दै हिडेका हुन्छन् । मानसिक स्थिती ठिक नभएको जस्तो आचरण गर्दै छन् ।
-आध्यात्म के हो?
यो आध्यात्म शक्ति भगवानलाई प्रसन्न बनाई प्राप्त गर्ने सिप वा केहि भिन्न काम गर्न सक्ने क्षमतालाई बुझिन्छ । हाम्रो पुर्वज पुस्ता आमा बुवा आफुले यो धर्मको सृष्टि काहाँबाट भयो हिन्दु धर्मको कहाँबाट उत्पन्न भयो त्यो इतिहासले बताउछ, इतिहासले हामीलाई जन्माएको हो । त्यसैले हामिले धर्म गर्नु पर्छ । नेपाल देश भनेको यस्तो देश हो जहाँ धर्मसँग सँगै मानवको अवतरण भएको छ । यो लालछाप लागाएको धर्म हो यसको नियम पालना गर्दै संरक्षण गर्नु पर्छ ।
-थोरै दक्षिणकालि माताको महिमा बताइदिनुहोस न ?
दक्षिणकाली तान्त्रिक मध्य सर्बश्रेष्ठ हुनुन्छ, उहाँको शक्ति को महिमा वर्णन गरेर संम्भव छैन र जस्ले साँचो मनले उहाँलाई पुजा अनि आराधना गर्छ उस्ले आफै महसुस गरेको छ र गर्ने छ।
-भगवान छैनन् भन्ने नाष्तिक हरुलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
भगवान छैनन् भन्ने मानिसले मेरो आमा बाबा पनि छैनन् भन्न सक्नु पर्याे मेरो नाता गोता कोहि छैन भन्नु पर्‍र्याे यदि भगवान नभए नारी पुरुषको सम्बन्धले मात्र हाम्रो आकार बन्ने हो भने केटा मान्छेको शुक्रकिट त्यो जहाँ राखेनि बच्चा जन्माए भयो नि त आज भगवानको स्रोत साधन नहुने हो भने नारी पुरुषको सम्बन्धलाई आकार बनाउन असम्भव हुन्छ । आत्मा भगवान भनेर प्रमाणित भएको छ र अब भगवान छैन भन्नुचाँहि र्मुखता हो ।
-हजुरको देश विदेशमा निकै माग अनि महत्वपूर्ण मानिनुको कारण के होला ?
त्यो मैले गरेको सेवा मैले बोलेको आचरण अनि कार्य शैलिमा भर पर्छ । मैले राम्रो काम गरे भने सबैले मन पराउछन् मैले राम्रो सामान बनाए भने जस्ले पनि किन्छ नि त्यस्तै म जहाँ जादा पनि मानिसको हरेक समस्याको सावधान गरेको छु त्यसैले मलाई बैवैले माया गर्नुभएको हो । एक अलौकिक शक्तिद्धारा दक्षिणकाली आमाको शक्ति पशुपति बाबाको शक्ति तथा नेपालमा भएका सम्पूर्ण देवि देवताको म प्रति भएको कृपाले मानिसको कुनै पनि समस्याको सावधान गरी दिए पछि सवैले माग गर्दा रहेछन् । एउटाको समस्या सावधान गर्‍र्याे अर्काेले बोलाउछ यो संसारमा समस्या नहुने व्यक्ति कोहि नभएर होला ।